NK | युवा नेतृत्व
प्रकाशित मिति: २५ असार २०७८, शुक्रबार
काठमाडौं । युवा पुस्ताबारे बहस गरिरहँदा हामीले प्रतिनिधित्व गर्ने वा हामीले बहसको केन्द्रमा राखेका युवा को हुन् ? युवा भन्नेबित्तिकै वैज्ञानिक रूपमा पनि निश्चित उमेर समूहसँग जोडिन्छ । जिन्दगीका अनेक कष्टहरूबाट झेलिँदै गाँस, वास, कपास र एउटा सुरक्षित जीवनको परिकल्पनामा देशभित्र र बाहिर श्रममा हेलिएको युवाहरूसँग राख्ने अपेक्षाहरू कत्तिको वस्तुनिष्ठ हुन्छन् ? नेपाली समाजले आजको युवासँग राख्ने अपेक्षा र हामीले राखेको नेतृत्वको अपेक्षा तादात्म्य छ ? हामीले खोजेको नेतृत्व खास उमेर समूहसँग मात्र जोडिएको हो कि उसका विविध आयाम र प्रश्नहरूमा निर्भीक उभिन सक्ने भिजन, आचरण एवं व्यवहार भएको हो ?
अबको नेतृत्वबारे मन्थन गर्दा उस लाई उपलब्धि वा पदमा मात्र सीमित नराखेर, नेतृत्व प्रक्रियामा, केन्द्रीय राजनीतिमा मात्र नभई सामुदायिकतामा समुदायस्तरमा खोजिनुपर्दछ । नयाँ गतिशील र मुद्दा केन्द्रित राजनीति खोजेको हो भने समाजका आधारभूत प्रश्नहरूलाई पन्छाएर होइन, त्यसमा पर्याप्त बहस गर्ने एवं नयाँ काल्पनिकीको खोजी गर्ने र तत्कालको लोकरिझ्याइँमा रमाउने होइन, आलोचना खप्न र जोखिम उठाउन तयार सामूहिक र संगठित प्रयत्नको खाँचो छ । ७० कटेका बर्नि स्यान्डर्सले अमेरिका, कोर्विनले बेलायतहरूमा युवा पुस्तालाई लिएर नयाँ अर्थराजनीतिक व्यवस्थाको उद्घोष गरिरहेका छन् । के हाम्रो समाज त्यस्तै सहकार्य र सामूहिक प्रयत्नका लागि तयार छ ? चल्तीको लोकरिझ्याइँको राजनीतिबारे प्रश्न गर्दै लोकपरिर्वतनको राजनीतिमा सामूहिक नेतृत्वको औचित्य र आवश्यकताबारे थप बहसहरू हुँदै जानुपर्छ
एक पल हैन हरेक पल जन्मनु , शुभकामना !
आज राजा ज्ञानेन्द्रको जन्मदिन